जनप्रतिनिधि दिउँसो छाउगोठ भत्काउने अभियानमा, राति आफै छाउगोठमा ! « Deshko News
जनप्रतिनिधि दिउँसो छाउगोठ भत्काउने अभियानमा, राति आफै छाउगोठमा !
वडा नम्बर ६ बाट सुरु भएको अभियानअन्तर्गत करिब दुई दर्जन छाउगोठ भत्काइसकिएको छ । गाउँपालिकाको मुकाम जयगढ बजारबाट करिब एक किलोमिटर पर तिमिल्सैन गाउँमा रहेको उनको घरनजिकै छाउगोठ छ । टोलका ६ परिवारका महिला महिनावारी हुँदा त्यही छाउगोठमा बस्छन् । ‘घरको आँगनमा समेत पाइला राख्न मिल्दैन । हामी त चेतनशील छौँ, तर परिवारलाई सम्झाउन गाह्रो छ, त्यसैले छाउगोठमा बस्न बाध्य छौँ,’ उनले भनिन् ।
बान्नीगढी–जयगढ गाउँपालिका–५, स्थित आदर्श आधारभूत विद्यालयमा १२ वर्षदेखि पढाउँदै आएकी मिठु बोहराको घर नजिकै छाउगोठ छ । उनी महिनावारी हुँदा कहिल्यै घरभित्र पस्नसमेत पाएकी छैनन् । छाउपडीजस्ता सामाजिक कुसंस्कारविरुद्ध शिक्षा दिनुपर्ने उनी आफैँ महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्छिन् । ‘भित्रै बस्न पाउनुपर्ने हो, तर परिवार र समाजले अवरोध गर्छ,’ बोहराले भनिन्, ‘समाजका सबै महिला छाउगोठमै बस्छन्, म मात्रै भित्र बस्दा समाजले के भन्ला भन्ने डर लाग्छ ।’
छाउ भएका शिक्षिकालाई विद्यालय जानसमेत अवरोध छ । तुर्माखाँद–८ को सरस्वती प्राविकी शिक्षिका जमुना रावल पहिले–पहिले छाउ भएका वेला पनि विद्यालय जान्थिन् । ‘म सुरुसुरुमा महिनावारी भएका वेला विद्यालय पनि गएको हो । तर, विद्यालयनजिकै देउताको मन्दिर भएकाले त्यहाँ जान मिल्दैन भनेर विरोध भयो ।
त्यसैले अहिले महिनावारी भएका वेला म बिदा लिएर बस्छु,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँमा छाउ नबार्ने एकजना वडा सदस्य थिइन् । उनले सुरुमा महिनावारी बारिनन् । त्यसपछि कसको छोरी हो रु कहाँबाट ल्याएको हो रु भैँसी पाल्ने गोठमा बस्दिनँ भन्ने राजाको छोरी हो कि भनेर उनलाई समाजले बहिष्कार गरे ।’ यसरी समाजकै डरले चेतनशील महिलाहरू पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् ।
अछाम मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीवरिपरि नै छाउगोठ छ । कैलालीको गोदावरी–१२ का वडा सदस्य बाली साउदको घरमै छाउगोठ छ । उनका छोरी र बुहारी महिनावारी हुँदा अहिले पनि छाउगोठमै बस्छन् । अरू सबैले छाउगोठ भत्काए मात्र आफूले पनि भत्काउने बालीकी श्रीमती रम्बाको भनाइ छ । तर पनि महिनावारी भएको चार दिनसम्म छोरी–बुहारीलाई घरभित्र पस्न नदिने उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘सबैतिर भत्काए हाम्रो छाउगोठ पनि भत्काउने कुरा भएको छ । तर, छाउ भएको चार दिनसम्म छोरी–बुहारीलाई घरभित्र बस्न दिन मिल्दैन,’ रम्बाले भनिन्, ‘श्रीमान् जनप्रतिनिधि मात्र होइन, धामी पनि हुनुहुन्छ । महिनावारी भएको महिला घरभित्र छिरे उहाँ काम्नुहुन्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।